Vavaka andavanandro sy dinika fohy momba ny finoana kristianina - Aumônerie Katolika Malagasy - Roma Italia
Vavaka andavanandro sy dinika fohy momba ny finoana kristianina
Amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen.
Hataky ny Tompo
Rainay any an-danitra, hohamasinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, ho tanteraka anie ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay anio ny haninay isan’andro, avelao ny fahotanay tahaka ny amelanay izay nanao ratsy taminay, aza avelanao ho azan’ny fitaoman-dratsy izahay, fa manafaha anay amin’ny ratsy. (Fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay). Amen.
Arahaba ry Maria feno hasoavana, ny Tompo ao aminao, nosoavina noho ny vehivavy rehetra ianao, ary nosoavina i Jesoa nateraky ny kibonao. Masina Maria, Renin’Andriamanitra, mivavaha ho anay mpanota, ankehitriny ary amin’ny andro hahafatesanay. Amen.
Ry Jesoa o
Ry Jesoa o, avelao ny fahotanay, arovy izahay amin’ny memin’ny afobe, tariho mankany andanitra ny fanahy rehetra, indrindra ireo izay mila ny famindramponao bebe kokoa. Amen.
Izaho mino an’Andriamanitra, Ray mahefa ny zavatra rehetra, nahary ny lanitra sy ny tany. Izaho mino an’i Jesoa Kristy, Zanany tokana Tompontsika, noforonin’ny Fanahy Masina, naterak’i Maria Virijiny, nijaly faha Pontsy Pilaty, nofantsihina tamin’ny hazofijaliana, maty dia nalevina, nidina tany ambany tany; nitsangan-kovelona tamin’ny andro fahatelo; niakatra any an-danitra, mipetraka eo an-kavanan’Andriamanitra Ray mahefa ny zavatra rehetra, avy any Izy mbola ho avy, hitsara ny velona sy ny maty. Izaho mino ny Fanahy Masina, ny Eglizy masina manerana ny tany, ny fiombonan’ny olomasina, ny fanalana ny ota, ny hitsanganan’ny vatantsika ho velona, ary ny fiainana mandrakizay. Amen.
Tsarovinao, ry Maria Virijiny be famindrampo, fa tsy mbola re ny olona fa nafoinao, izay nanatona ny fiarovanao sy nihanta ny fanampianao ary nangataka ny fifonanao; matoky izany aho, dia midodododo manketo aminao, ry Reny Virijiny lohan’ny virijiny rehetra, manatona anao aho mpanota, aza malain-kihaino ny teniko ry Renin’ny Teny, fa raiso tsara izy ary ekeo. Amen
Izahay mifefy aminao, ry Renimasin’Andriamanitra, aza manary ny fangatahanay amin’ny manjoa anay, fa afaho amin’ny rofy rehetra mandrakizay izahay, ry Virjiny be voninahitra sy be hasoavana.
Ry Misely arkanjely masina
Ry Misely arkanjely masina, ampio izahay amin’ny ady majoa anay, arovy izahay amin’ny hasoparana sy ny fandriky ny Demony; ary ianao ry filohan’ny tafiky ny lanitra, noho ny herin’Andriamanitra dia tohero i Satana sy ny fanahy mpanimba rehetra izay mihahaka eran’izao tontolo izao mba hahavery ny olona, ary avarino amin’ny afobe. Amen.
Anjelin’Andriamanitra, mpiambina ahy sy nanakinan’Andriamanitra mpamindra fò ny aiko; hazavao aho anio, ambeno, tahio ary zakao. Amen.
Andriamanitra omeo ny fahasoavanao
Andriamanitra, omeo ny fahasoavanao, ny havako, ny mpano soa ahy, ny sakaizako sy ny fahavaloko; vonjeo ny mahatra, ny marary sy ny miala aina; tariho ao amin’ny Eglizinao ny olona mivavaka aminao amin’ny fò mahitsy; ampivalozy ny mpanota ary tsilovy ny tsy mino. Andriamanitra o, afaho ny fanahin’ny olona marina izay mbola ao amin’ny afofandiovana. Koa omeonao ny fiadanana mandrakizay izy.
Andriamanitra, izaho mino mafy ny teny rehetra inoan’ny Egilizy masina manerana ny tany (katolika) sy ampianariny anay, fa Ianao no nanambara izany taminy.
Andriamaitra, izaho miankina amin’ny teninao sy amin’ny soa nataon’i Jesoa Kristy; koa manantena ny fitahianao eto an-tany aho sy ny fahafinaretana any an-danitra, raha manaraka ny didinao aho (na: eo am-panatanterahana ny sitrakao).
Andriamanitra, izaho tia anao amin’ny foko rehetra, ambonin’ny zavatra rehetra; satria ianao tsara indrindra ka tokony ho tiana indrindra; izaho tia ny namako tahaka ny tenako, noho ny fitiavako anao.
Miampaga tena amin’Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra aho, ary koa amintsika mianakavy, fa nanota tokoa aho tamin’ny hevitro, tamin’ny teniko, sy tamin’ny nataoko ary tamin’ny adidy tsy vitako: fahotako izany, fahotako, fahotako lehibe. Koa mihanta amin’i Msina Maria Virijiny mandrakizay aho, amin’ny anjely sy ny Olomasina rehetra ary koa amintsika mianakavy mba hivavaka ho ahy amin’ny Tompo Andriamanitsika.
Andriamanitra Tompoko, malahelo mafy amin’ny ratsy nataoko taminao aho, satria ianao tsara indrindra koa tokony ho tiana indrindra; ary ianao tsy tia ny ratsy, manampo fa tsy hanao ratsy aminao intsony aho, sy hanao asa fivalozana amin’ny fitahianao ahy.
Vavaka fohifohy sasantsasany
1- Ry Jesoa malemy fanahy sy manetry tena ao am-pò! Ataovy manahaka ny Fonao ny fonay!
2- Fanahy Masina, midìna ao anatinay, tsilovy amin’ny fahazavanao izahay, ary ampireheto ao am-ponay ny fitiavana anao.
3- Fanahy Masina: hazavao ny sainay. / Fanahy Masina: herezo izahay. / Fanahy Masina: hamasino izahay.
4- Fanahy Masina: misaotra anao izahay. / Fanahy Masina: makasitraka anao izahay./ Fanahy Masina: mankatelina anao izahay.
5- Jesoa, Maria, Josefa: omeko anareo ny foko sy ny fanahiko ary ny aiko. / Jesoa, Maria , Josefa: tahio eo am-piadiana aina aho. / Jesoa, Maria, Josefa: aoka ho faty eo ampelatananareo aho.
6- Fo Masin’i Jesoa, mamindrà fò aminay.
Fo Madion’i Maria, mivavaha ho anay.
Anjely mpiambina anay, ambeno sy arovy izahay.
Md. Josefa, mivavaha ho anay.
Md. Joany Batista, mivavaha ho anay.
Md. Piera sy Paoly, mivavaha ho anay.
Olontsambatra Victoire Rasoamanarivo, mivavaha ho anay.
Ianareo Razana efa any an-danitra, mivavaha ho anay.
Ireo zava-marina, fototra iorenan’ny finoana kristianina
Ireo mistery lehibe momba ny finoana
1. Tokana nefa Olona telo Andriamanitra.
2. Ny Fahatongavana ho nofo sy ny Fanavotana (Fijalian’i Jesoa Kristy Tompontsika sy ny Fahafatesany ary ny Fitsanganany ho Velona).
Ny Sakramenta (Tandindona) na Famantarana fito
1. Batemy, 2. Fankaherezana, 3. Eokaristia, 4. Fampihavanana, 5. Fanosorana ny marary,
6. Filaharana, 7. Fanambadiana.
Fanomezana fito avy amin’ny Fanahy Masina
1. Fahendrena, 2. Fahazavantsaina, 3. Fifidianana, 4. Faherezana, 5. Fahalalana,
6. Fitiavam-bavaka, 7. Fahatahorana an’Andriamanitra.
Ireo herim-panahy telo (na hataram-panahy) telo araka an’Andriamanitra
1.Finoana, 2. Fanantenana, 3. Fitiavana (Fangorahana, Fiantrana).
Ireo herim-panahy ara-pitondrantena efatra
1. Fahamalinana, 2. Rariny, 3. Herimpò, 4. Faharetana.
Ireo zava-baovao efatra ( aorian’izao fiaina-mandalo izao)
1. Ny Fahafatesana, 2.Ny Fitsaràna, 3. Ny Afobe, 4. Ny Lanitra.
Fitsipika fototra iorenan’ny fiainana kristianina
Izaho no Tompo Andriamanitrao
1. Ianao aza manana Andriamanitra hafa afatsy Izaho.
2. Aza manonononom-poana ny anaran’Andriamanitra.
3. Mankamasina ny andro fety (alahady sy fety voadidy).
4. Manajà ny ray aman-dreny, mba ho ela velona hianao.
5. Aza mamono olona.
6. Aza mijangajanga.
7. Aza mangalatra.
8. Aza miapanga lainga, aza mandainga.
9. Aza maniry vadin’olona.
10. Aza maniry fananan’olona.
Ny didy roa lehibe indrindra, momba ny fitiavana
1.Tiavo ny Tompo Andriamanitrao, amin’ny fonao sy amin’ny fanahinao tontolo ary amin’ny herinao rehetra. 2.Tiavo ny manodidina anao sy ny namanao tahaka ny tenanao.
Ny hasambarana valo araka ny Vaovao Mahafaly
1. Sambatra izay miaiky ao am-pò ho mahantra, fa azy ny fanjakan’ny lanitra.
2. Samabatra izay mitomany, fa hankaherezin’Andriamanitra izy.
3. Sambatra ny malemy fanahy, fa izy no handova ny tany.
4. Sambatra izay noana sy mangetaheta ny fahamarinana, fa ho voky izy.
5. Sambatra izay mamindra fò, fa hamindrana fò izy.
6. Sambatra izay mahitsy fò, fa hahita an’Andriamanitra izy.
7. Sambatra izay mpampihavana, fa hantsoina hoe zanak’Andriamanitra izy.
8. Sambatra ireo enjehina noho izy manao ny marina, fa azy ireo ny Fanjakan’ny lanitra.
Ny didin’ny Eglizy
1. Mankamasina ny andro Alahady sy ny fety voadidin’ny Eglizy ho hamasinina. Mandraisa anjara amin’ny Sorona Masina: ny Alahady sy ny Fety voadidy, raha azo atao izany.
2. Manajà ny andro natao hivalozana sy ho fanonerana, araka toromariky ny Fiangonana.
3. Mandraisa ny Sakramentan’ny Fampihavanana na dia indray mandeha isan-taona avao aza; ary mandraisa ny Eokaristia, farafaharatsiny isaky ny Paka (vanim-potoanan’ny Paska).
4. Manampia ny Fiangonana amin’ny fandraisana anjara eo amin’ny adidy samihafa, araka izay ilainy.
5. Tsy hataonao manetriketrika ny fankalazàna ny Fanambadiana amin’ny fotoana voatondro tsy hanaovana izany.
Ny asa fiantrana fito ara-batana
1. Manome hanina ny noana, 2. Manome rano ny mangetaheta, 3. Manafy lamba ny tsy mitafy, 4. Mampiantrano ny mpivahiny, 5. Mamangy ireo marary sy osa, 6. Mamangy ireo migadra, 7.Mandevina ny maty.
Ny asa fiantrana fito ara-panahy
1. Manoro hevitra an’ireo misalasala, 2. Mampianatra an’ireo tsy mahalala, 3. Manampy ireo mpanota hivalo, 4. Mankahery ireo malahelo, 5. Mamela (tsy mitana) ireo fanaratsiana ataon’ny hafa. 6. Mizaka am-paharetana ireo olona manadaladala ny tena (mamerivery), 7. Mitalaho amin’Andriamanitra ho an’ny velona sy ny maty.
Ny fahotana fito fototry ny hafa
1. Ny fiavonavonana, 2. Ny fahihirana (mahidy, matity), 3. Ny filibana (fahalotoana ara-pitondran-tena), 4. Ny fahatezerana, 5. Ny hatendan-kanina, 6. Ny fialonana, 7. Ny hakamoana.
Ny fahotana enina manohitra ny Fanahy Masina
1. Famoizam-pò ny amin’ny famonjena, 2. Fiheveran-tena ho voavonjy tsy mila ny fahamendrehana, 3. Fandavana ny marina efa fantatra, 4. Fialonana ny fahasoavana azon’ny hafa, 5. Fifikirana amin’ny fahotana, 6. Tsy fivalozana (tsy fibebahana) amin’ny ora farany.
Ireo fahotana efatra miandry famaliana avy amin’Andriamanitra
1. Famonoana olona an-tsitrapò, 2. Fahotana maloto mifanohitra amin’ny maha-voajanahary, 3. Fanesoana ny mahantra, 4. Fangalarana an-kolaka amin’ireo mpiasa madinika (fakana aminy tombony be amin’ny varotra na fanomezana karama varimasaka azy ireo).
Eugene Hery - Tel +39 338 744 2412 (Italie) - [0.0128 s.]